MD5 ह्यास जेनेरेटर
नि: शुल्क ब्याकलिङ्क निर्माणकर्ता
मेटा ट्याग जेनरेटर
HTTP हेडर जाँच
SHA1 ह्यास जेनेरेटर
बलियो पासवर्ड जनरेटर
मेरो म्याक ठेगाना के हो?
अनलाइन वेबसाइट पिंग उपकरण
GZIP कम्प्रेसन परीक्षण
अनियमित नाम जनरेटर
वेब रङ प्यालेटहरू
व्यापार नाम जनरेटर
Youtube च्यानल नाम जनरेटर
HTML कोड एन्क्रिप्शन
अनलाइन JPG छवि सङ्कुचन
इन्टरनेट गति परीक्षण उपकरणको लागि धन्यवाद, तपाइँ आफ्नो इन्टरनेट गतिको डाउनलोड, अपलोड र पिङ डेटा छिटो र सहज रूपमा मापन गर्न सक्नुहुन्छ।
इन्टरनेट गति परीक्षण के हो?
इन्टरनेट गति परीक्षणले तपाईको हालको जडान कति छिटो छ भनेर परीक्षण गर्दछ र तपाईले हाल प्राप्त गरिरहनुभएको गति देखाउँदछ। यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि इन्टरनेट प्याकेट गति जुन तपाइँको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तपाइँलाई प्रदान गर्दछ र तपाइँले स्वीकार गर्नुहुने गति तपाइँ मापन गर्ने गति संग समानांतर हो। इन्टरनेट गति परीक्षणले तपाइँको पिंग, अपलोड र डाउनलोड गति देखाउँछ। सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले डाउनलोड गतिको वाचा गर्छन्। तपाईंको परीक्षणको परिणाम स्वरूप, परीक्षणमा देखा पर्ने प्रतिज्ञा गरिएको गति र डाउनलोड गति फरक हुनु हुँदैन।
इन्टरनेट गति परीक्षण कसरी काम गर्छ?
जब तपाइँ गति परीक्षण सुरु गर्नुहुन्छ, तपाइँको स्थान निर्धारण गरिन्छ र तपाइँको स्थानको नजिकको सर्भर पत्ता लगाइन्छ। तपाईको स्थानको नजिकको सर्भर पत्ता लागेपछि, यो सर्भरमा एक साधारण सिग्नल (पिङ) पठाइन्छ र सर्भरले यो संकेतलाई प्रतिक्रिया दिन्छ। गति परीक्षणले यो सिग्नलको यात्रा र फिर्ता समय मिलिसेकेन्डमा नाप्छ।
सिग्नल पठाउने कार्य पूरा भएपछि, डाउनलोड परीक्षण सुरु हुन्छ। इन्टरनेट गति परीक्षणको क्रममा, सर्भरसँग धेरै जडानहरू स्थापित हुन्छन् र डाटाका साना टुक्राहरू यी जडानहरू मार्फत डाउनलोड गर्न प्रयास गरिन्छ। यस बिन्दुमा, डाटा प्राप्त गर्न कम्प्युटरलाई कति समय लाग्छ र यो डाटा प्राप्त गर्दा कति डाटा प्रयोग गरिन्छ भनेर जाँच गरिन्छ।
हर्ट्ज परीक्षण सुरु गर्न तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको सबै हो; मिलेनिकम स्पीड टेस्ट पृष्ठमा प्रवेश गरेपछि, बटन थिच्नुहोस् जुन GO भन्छ। यो बटन थिचेपछि, तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको जानकारी तपाईंलाई डाउनलोड, अपलोड र पिङ शीर्षकहरू अन्तर्गत पठाइनेछ।
गति परीक्षण अघि विचार गर्न चीजहरू
आफ्नो गति परीक्षण गरेर सबैभन्दा सही नतिजा प्राप्त गर्नको लागि, निम्न चरणहरू परीक्षण अघि अवलोकन गर्नुपर्छ। यी चरणहरू पालना गरेपछि, तपाइँ इन्टरनेट गति परीक्षण सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
मोडेम बन्द र अन गर्नुहोस्: तपाईंको मोडेम लामो समयसम्म निर्बाध रूपमा काम गर्ने भएकोले, यसको प्रोसेसर र र्याम थकित हुन्छ। इन्टरनेट गति मापन गर्नु अघि, पहिले आफ्नो मोडेम बन्द गर्नुहोस्, 10 सेकेन्ड पर्खनुहोस्, र त्यसपछि यसलाई पुन: सुरु गर्नुहोस्। यसरी, मोडेमले पूर्ण कार्यसम्पादनका साथ काम गर्छ र तपाईंको इन्टरनेटको गति ठ्याक्कै र सही रूपमा मापन गरिन्छ।
यदि उच्च डाटा एक्सचेन्ज भएका प्रोग्रामहरू छन् भने, तिनीहरूलाई बन्द गर्नुहोस्: तपाईंको कम्प्युटरमा चलिरहेको प्रोग्रामहरू र टोरेन्ट अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्नुहोस् इन्टरनेट गति परीक्षणमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। यस कारणका लागि, गति परीक्षण अघि यी कार्यक्रमहरू बन्द गर्न सिफारिस गरिन्छ।
गति परीक्षण पृष्ठ बाहेक सबै खुला पृष्ठहरू र अनुप्रयोगहरू बन्द वा असक्षम गर्नुहोस्: इन्टरनेट गति परीक्षण गर्दा तपाईंको कम्प्युटर वा उपकरणमा पृष्ठभूमिमा चलिरहेको अनुप्रयोगहरू हुन सक्छन्, जसले तपाईंलाई आफ्नो इन्टरनेट जडान प्रयोग गरेर सही परिणामहरू प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्छ। यस कारणका लागि, गति परीक्षण गर्नु अघि, गति पृष्ठ बाहेक सबै खुला अनुप्रयोगहरू र पृष्ठहरू बन्द गरिनुपर्छ।
तपाईंले परीक्षण गरिरहनुभएको यन्त्र मात्र तपाईंको मोडेममा जडान भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्: विभिन्न यन्त्रहरू मोडेममा जडान हुँदा तपाईंले फरक परिणामहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ अन्य उपकरणहरूबाट इन्टरनेट पहुँच गर्नुहुन्न भने पनि, पृष्ठभूमिमा चलिरहेका धेरै अनुप्रयोगहरूले तपाइँको इन्टरनेट गति प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ र यसलाई सुस्त बनाउँछ। यस कारणका लागि, तपाईंले प्रयोग गरिरहनुभएको यन्त्र बाहेक अन्य यन्त्रहरू, जस्तै मोबाइल फोन, ट्याब्लेटहरू, एउटै नेटवर्कबाट इन्टरनेट जडान प्रयोग नगर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको मोडेम र तपाइँले प्रयोग गरिरहनुभएको यन्त्र बीचको दूरी धेरै टाढा छैन: संकेतहरू मिश्रित हुन सक्छन् किनभने मोडेम र उपकरण धेरै टाढा छन्। सबैभन्दा सही नतिजा प्राप्त गर्नको लागि, तपाईंले इन्टरनेट जडान र मोडेम मापन गर्न चाहनुभएको यन्त्रको बीचमा सानो दूरी हुनुपर्छ।
इन्टरनेट गति परीक्षण परिणाम के हो?
जब तपाइँ गति परीक्षण गर्नुहुन्छ, तपाइँ डाउनलोड, अपलोड र पिङ शीर्षकहरू अन्तर्गत विभिन्न संख्याहरू देख्नुहुनेछ। तपाईंले तल यी शीर्षकहरूको अर्थ के बारे विवरणहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
डाउनलोड गति (डाउनलोड): डाउनलोड गति (डाउनलोड गति), मेगा बिट प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस) एकाइमा मापन गरिएको, इन्टरनेट गति कम भएको ठानिएको अवस्थामा जाँच गरिनु पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान हो। यो गति हो जुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई बिक्री गर्दा वाचा गर्छन्। यस कारणले गर्दा, गति परीक्षण गर्दा मापन गरिएको डाउनलोड गति र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पहिलो स्थानमा प्रतिज्ञा गरेको गतिको बीचमा समानान्तरता हुनुपर्छ।
डाउनलोड गति, जुन रेखाको गति निर्धारण गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचक हो, यन्त्रले इन्टरनेटबाट कति छिटो डेटा तान्न सक्छ र तिनीहरू अपलोड भन्दा धेरै उच्च गतिमा छन् भनेर देखाउँछ।
डाउनलोड गति इन्टरनेटबाट डाटा डाउनलोड गर्न प्रयोग गरिन्छ। जब तपाइँ तपाइँको ब्राउजरको ठेगाना लाइनमा इन्टरनेटमा वेब साइटको ठेगाना टाइप गर्नुहुन्छ र इन्टर थिच्नुहुन्छ, तपाइँको ब्राउजरले तपाइँ प्रविष्ट गर्न चाहनु भएको पृष्ठमा सबै पाठ, चित्र र ध्वनिहरू डाउनलोड गर्न सुरु गर्दछ। , त्यो हो, "डाउनलोड"। इन्टरनेट सर्फिङ र अनलाइन भिडियोहरू हेर्ने जस्ता धेरै गतिविधिहरूको लागि इन्टरनेट डाउनलोड गति प्रभावकारी हुन्छ। तपाईको डाउनलोड गति जति उच्च हुन्छ, तपाईको इन्टरनेटको गति त्यति नै राम्रो हुन्छ।
जब हामी आजको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने बानीहरू र इन्टरनेट प्रयोग क्षेत्रहरू हेर्छौं, 16-35 Mbps बीचको इन्टरनेट गति आदर्श मान्न सकिन्छ। यद्यपि, इन्टरनेट प्रयोग गर्ने बानी अनुसार यसभन्दा तल वा माथिको गति पनि उपयुक्त गति हो।
अपलोड दर (डाउनलोड): अपलोड दर सर्भरमा पठाइएको डाटा दर देखाउने मान हो। यसको मतलब तपाईंले पठाउनुभएको डाटा हेर्नको लागि समय लाग्छ। यसले तपाइँको फाइल अपलोड गति पनि निर्धारण गर्दछ। अपलोड गति डाउनलोड गति भन्दा कम मान छ। भिडियो कल गर्ने, अनलाइन गेम खेल्ने र इन्टरनेटमा ठूला फाइलहरू अपलोड गर्ने जस्ता गतिविधिहरू राम्रोसँग गर्नको लागि अपलोड गति पर्याप्त हुनुपर्छ।
आजकल, अनलाइन खेल्ने, इन्टरनेटमा भिडियो अपलोड गर्ने जस्ता कार्यहरू सामान्य भइसकेका छन्। तदनुसार, उच्च अपलोड मानहरू पुग्न महत्त्वपूर्ण छ।
पिंग दर: पिंग; यो "प्याकेट इन्टरनेट -नेटवर्क ग्रोपर" पाठको संक्षिप्त रूप हो। हामी टर्कीमा पिंग शब्दलाई "इन्टरनेट प्याकेट वा इन्टर-नेटवर्क पोलर" को रूपमा अनुवाद गर्न सक्छौं।
पिङलाई जडानहरूमा प्रतिक्रिया समयको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। यसले तपाईंको अवस्थित डाटालाई अर्को सर्भरमा जानको लागि समय मापन गर्दछ। जब तपाइँ विदेशमा डाटामा जडान गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ, पिंग समय लामो हुन थाल्छ। यस मुद्दालाई व्याख्या गर्न हामी बुलेटको उदाहरण दिन सक्छौं। जब तपाइँ नजिकको पर्खालमा गोली हान्नु हुन्छ, तपाइँले स्प्रे गरिरहनुभएको सतहबाट गोली निस्कन र फिर्ता आउन छोटो समय लाग्नेछ। जे होस्, जब तपाईं आफ्नो ठाउँबाट टाढाको पर्खालमा गोली हान्नु हुन्छ, गोलीलाई त्यो सतहमा पुग्न धेरै समय लाग्छ र त्यसैले पछाडि उछाल्छ।
पिङ अनलाइन गेमरहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो समय जति कम हुन्छ, खेलमा जडानको गुणस्तर त्यति नै खुसी हुनेछ। Youtube, Netflix जस्ता एप्लिकेसनहरूमा भिडियोहरू हेर्दा वा विदेशबाट साइट पहुँच गर्ने प्रयास गर्दा, उच्च पिङ समयले भिडियोहरू ह्याङ्ग हुन सक्छ, लामो समय मा पूरा गर्न वा फ्रिज हुन सक्छ।
आदर्श पिंग समय तपाइँ इन्टरनेट को लागी प्रयोग गर्नुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ। केहि प्रयोगकर्ताहरूको लागि उच्च पिंग अन्य प्रयोगकर्ताहरूको लागि समस्या नहुन सक्छ।
तपाईंले तलको तालिकाबाट पिंग समय अन्तरालहरू अनुसार प्राप्त गर्नुहुनेछ प्रदर्शनमा एक नजर लिन सक्नुहुन्छ;
0-10 ping - धेरै उच्च गुणस्तर - सबै अनलाइन खेलहरू सजिलै खेल्न सकिन्छ। तपाईं आरामसँग भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
10-30 ping - राम्रो गुणस्तर - सबै अनलाइन खेलहरू सजिलै खेल्न सकिन्छ। तपाईं आरामसँग भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
30-40 पिंग - आदर्श - सबै अनलाइन खेलहरू आरामसँग खेल्न सकिन्छ। तपाईं आरामसँग भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
40-60 पिंग - औसत - यदि सर्भर व्यस्त छैन भने, अनलाइन खेल खेल्न सकिन्छ। तपाईं आरामसँग भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
60-80 पिंग - सामान्य - यदि सर्भर व्यस्त छैन भने, अनलाइन खेलहरू खेल्न सकिन्छ। तपाईं आरामसँग भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
80-100 पिंग - खराब - कुनै अनलाइन गेम प्ले छैन। भिडियोहरू हेर्दा तपाईंले चिसो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
100 वा बढीको पिङ - धेरै खराब - कुनै अनलाइन गेमहरू छैनन् र हेर्नको लागि धेरै गाह्रो भिडियोहरू। आदेशहरू ढिलो सर्भरमा पठाइन्छ।
इन्टरनेट गति परीक्षण कत्तिको सही हो?
यद्यपि इन्टरनेट गति परीक्षण क्वेरी प्रक्रिया सरल जस्तो लाग्न सक्छ, यो तपाईंको इन्टरनेट गति सही रूपमा परीक्षण गर्न धेरै गाह्रो प्रक्रिया हो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट प्रदायक (दूरसञ्चार) कम्पनीहरूले पनि आफूले विकास गरेको सफ्टवेयरमार्फत इन्टरनेटको गति परीक्षण गर्न सक्दैनन्। यो ज्ञात तथ्य हो कि संसारभरका धेरै ठूला इन्टरनेट प्रदायकहरूले सशुल्क इन्टरनेट गति परीक्षण उपकरणहरू प्रयोग गर्छन्।
इन्टरनेट गति परीक्षणको पहिलो चरण सम्झनुहोस्: पहिले, तपाईंले सर्भरमा जडान गर्न आवश्यक छ। इन्टरनेट गति परीक्षण गर्दा, तपाईंले परीक्षण गरिरहनुभएको सर्भर तपाईंको नजिक वा उही शहरमा पनि हुन सक्छ। ध्यान दिनुहोस् कि इन्टरनेट तपाइँको धेरै नजिक छैन भले पनि सर्भर तपाइँको धेरै नजिक छ। तपाईले डाउनलोड गर्न चाहनुभएको डेटाको सर्भर तपाईबाट धेरै टाढा वा संसारको अर्को छेउमा पनि अवस्थित हुन सक्छ। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ इन्टरनेट गति परीक्षणमा राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यहाँ परिस्थितिहरू हुन सक्छ जहाँ यसले वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दैन।
तपाइँको इन्टरनेट गति परीक्षण को शुद्धता तपाइँ के मापन गर्न चाहनुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ। यदि तपाइँ तपाइँको इन्टरनेट प्रदायकले तपाइँलाई प्रतिज्ञा गरेको गति प्रदान गर्दछ कि भनेर जाँच गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ सिधै परीक्षण सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, त्यहाँ केसहरू छन् जहाँ तपाइँ सिधै परीक्षण सुरु गर्न सक्नुहुन्न।
यदि तपाइँ एक प्रसारक हुनुहुन्छ वा तपाइँको घरमा लगातार इन्टरनेटमा जडान भएका यन्त्रहरू छन् भने, यदि तपाइँ यी उपकरणहरू बन्द गरेर परीक्षण गर्नुहुन्छ भने तपाइँ यथार्थवादी परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। यस बिन्दुमा, मानक सर्तहरूमा परीक्षण प्रदर्शन गर्नु उत्तम चाल हुनेछ र तपाईं यस तरिकाले सबैभन्दा यथार्थपरक परिणामहरूमा पुग्नुहुनेछ।
Mbps भनेको के हो?
Mbps, जुन मेगाबिट्स प्रति सेकेन्ड हो, मेगाबिटमा प्रति सेकेन्ड ट्रान्सफर हुने डाटाको संख्याको अभिव्यक्ति हो। यो इन्टरनेट को गति को मानक एकाइ हो। यसले हामीलाई 1 सेकेन्डमा कति mbps डाटा ट्रान्सफर हुन्छ भनेर देखाउँछ। Megabit पनि "Mb" को रूपमा संक्षिप्त छ।
यद्यपि इन्टरनेट गति र डाउनलोड गतिको अवधारणाहरू एकअर्काबाट भिन्न छन्, तिनीहरू प्रायः भ्रमित हुन्छन्। इन्टरनेट गति सामान्यतया Mbps को रूपमा व्यक्त गरिन्छ, हामीले माथि उल्लेख गरे अनुसार, जबकि डाउनलोड गति KB/s र MB/s को रूपमा व्यक्त गरिन्छ।
तल तपाईले इन्टरनेट गति अनुसार प्रति सेकेन्ड डाउनलोड गर्न सक्ने फाइल कति ठूलो छ भन्ने बारे जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि, जब स्विचबोर्डको दूरी, पूर्वाधार र सर्भर गतिलाई ध्यानमा राखिन्छ, सैद्धान्तिक मानहरूमा गम्भीर कमीहरू अनुभव गर्न सकिन्छ।
1 Mbps - 128 KB/s
2 Mbps - 256 KB/s
४ Mbps देखि ५१२ KB/s
8Mbps - 1MB/s
16Mbps - 2MB/s
32Mbps - 4MB/s
आदर्श इन्टरनेट गति कति mbps हुनुपर्छ?
हामीले घरमा प्रयोग गर्ने अधिकांश इन्टरनेटमा हामीले अनलाइन हेर्ने भिडियोहरू, टिभी कार्यक्रमहरू, चलचित्रहरू, हामीले सुन्ने गीतहरू र हामीले खेल्ने खेलहरू समावेश हुन्छन्। मानिसहरूको इन्टरनेट आवश्यकताहरू र इन्टरनेट ट्राफिक पनि बढेको छ, विशेष गरी अनलाइन टिभि शृङ्खलाहरू र चलचित्र हेर्ने प्लेटफर्महरूका लागि धन्यवाद जुन अझ व्यापक भएको छ र हालसालै प्रयोग भइरहेको छ।
तपाइँको आदर्श इन्टरनेट गति को बारे मा निर्णय गर्दा निम्न दुई मुख्य कारकहरु लाई विचार गर्नुपर्छ;
तपाईको घरमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने व्यक्तिको संख्या,
इन्टरनेट प्रयोग गर्ने मानिसहरूको औसत इन्टरनेट प्रयोग र डाउनलोडको मात्रा।
भिडियो र चलचित्रहरू हेर्ने बाहेक, यदि तपाइँ नियमित रूपमा इन्टरनेटमा ठूला डाउनलोडहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको इन्टरनेट गतिले तपाइँको डाउनलोड गतिलाई पनि असर गर्छ। Steam बाट 5Mbps मा 10GB को गेम डाउनलोड गर्न लगभग4घण्टा लाग्छ, र 100Mbps इन्टरनेट जडानमा 15 मिनेट लाग्छ।
सामान्यतया, तपाइँ 8 Mbps को जडान गतिमा वेब सर्फ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको धेरै दैनिक इन्टरनेट कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मेल पठाउने। यस्ता कार्यका लागि उच्च इन्टरनेट स्पीड आवश्यक पर्दैन। यद्यपि, यदि तपाइँ भिडियोसँग प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै हुनुहुन्छ, ठूला फाइलहरू डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो च्याट गर्दै हुनुहुन्छ र इन्टरनेटमा भिडियोहरू गहन रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई छिटो इन्टरनेट प्याकेज चाहिन्छ।
आज, 16 Mbps र 50 Mbps बीचको इन्टरनेट प्याकेजहरू आदर्श मानिन्छ।
प्याकेट हानि के हो?
प्याकेट हानि तब हुन्छ जब तपाइँको नेटवर्क जडान संचारित भइरहेको बेला जानकारी गुमाउँछ। यसले तपाइँको नेटवर्क जडानलाई सुस्त बनाउन सक्छ र यन्त्रहरूसँग नेटवर्क संचारको विश्वसनीयता कम गर्न सक्छ। समस्याग्रस्त सञ्जाल ठीक गर्न चाहने जो कोहीको लागि, लिनु पर्ने पहिलो कार्यहरू मध्ये एउटा प्याकेट हानि रोक्नु पर्छ।
नेटवर्क ट्राफिकमा, जानकारीलाई नेटवर्कमा निरन्तर स्ट्रिमको रूपमा प्रसारित गर्नुको सट्टा प्याकेट भनिने अलग एकाइहरूको श्रृंखलाको रूपमा पठाइन्छ। यी एकाइहरूलाई पुस्तकमा अलग-अलग पृष्ठहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। जब तिनीहरू सही क्रममा छन् र सँगै तिनीहरूले अर्थ बनाउँछन् र एक सुसंगत उपस्थिति सिर्जना गर्छन्। जब तपाईंको नेटवर्क जडानले पृष्ठहरू, अर्थात् प्याकेटहरू गुमाउँछ, सम्पूर्ण पुस्तक, अर्थात् नेटवर्क ट्राफिक, उत्पन्न गर्न सकिँदैन। हराएको बाहेक, प्याकेजहरू हराइरहेको, क्षतिग्रस्त वा अन्यथा दोषपूर्ण पनि हुन सक्छ।
प्याकेट हानि धेरै कारण हुन सक्छ। तपाईंले प्याकेट गुमाउन सक्ने कारणहरू र यी कारणहरू विरुद्ध लिइने कार्यहरूको विवरण तल फेला पार्न सक्नुहुन्छ;
सफ्टवेयर बगहरू: कुनै सफ्टवेयर पूर्ण हुँदैन। तपाईंको नेटवर्क हार्डवेयर वा सफ्टवेयरमा बगहरू हुन सक्छ जसले प्याकेट गुमाउँछ। यस अवस्थामा, प्रयोगकर्ताले गर्न सक्ने थोरै छ। यदि तपाइँ यस्तो समस्याको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, समस्या समाधान गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरीका भनेको हार्डवेयर प्रदान गर्ने विक्रेतासँग परामर्श लिनु र तिनीहरूबाट कम्प्युटरमा आउन सक्ने फर्मवेयर डाउनलोड गर्नु हो। तपाईंले हार्डवेयर आपूर्ति गर्ने विक्रेतालाई फेला पार्नुभएका कुनै पनि शंकास्पद बगहरू रिपोर्ट गर्न निश्चित हुनुपर्दछ।
क्षतिग्रस्त केबलहरू: क्षतिग्रस्त केबलहरूको कारणले प्याकेट हानि पनि हुन सक्छ। यदि तपाइँको इथरनेट केबलहरू क्षतिग्रस्त छन्, गलत वायर्ड छन्, वा नेटवर्क ट्राफिक ह्यान्डल गर्न धेरै ढिलो छन् भने, प्याकेट हानि हुनेछ। यो समस्या समाधान गर्न, तपाईं आफ्नो केबल नवीकरण वा आफ्नो केबल जडान फेरि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
अपर्याप्त हार्डवेयर: तपाईंको नेटवर्कमा प्याकेटहरू फर्वार्ड गर्ने कुनै पनि हार्डवेयरले प्याकेट गुमाउन सक्छ। राउटरहरू, स्विचहरू, फायरवालहरू र अन्य हार्डवेयर उपकरणहरू सबैभन्दा कमजोर छन्। यदि तिनीहरूले तपाईंले फर्वार्ड गरिरहनुभएको ट्राफिकसँग "किप अप" गर्न सक्दैनन् भने, तिनीहरूले प्याकेजहरू छोड्नेछन्। यसलाई पूर्ण आस्तीन भएको वेटरको रूपमा सोच्नुहोस्: यदि तपाईंले तिनीहरूलाई अर्को प्लेट लिन भन्नुभयो भने, तिनीहरूले सम्भवतः एक वा धेरै प्लेटहरू छोड्नेछन्।
नेटवर्क ब्यान्डविथ र भीड: प्याकेट हराउने शीर्ष कारणहरू मध्ये एक अनुरोध गरिएको जडानको लागि अपर्याप्त नेटवर्क ब्यान्डविथ हो। धेरै यन्त्रहरूले एउटै नेटवर्कमा सञ्चार गर्ने प्रयास गर्दा यो हुन्छ। यस अवस्थामा, उही नेटवर्कमा कम यन्त्रहरूसँग सञ्चार गर्न सिफारिस गरिन्छ।
इन्टरनेटको गति किन सुस्त छ?
इन्टरनेटको गति समय समयमा फरक हुन सक्छ र तपाईंको इन्टरनेट सुस्त हुन सक्छ। यी उतार चढावहरू धेरै फरक कारणहरू हुन सक्छन्। हामी यी कारणहरूलाई निम्नानुसार सूचीबद्ध गर्न सक्छौं;
विभिन्न जडान प्रकारहरू: तपाइँको इन्टरनेट जडान तपाइँले प्रयोग गर्नुहुने जडानको प्रकारको आधारमा फरक हुन सक्छ। डायल-अप, डीएसएल वा केबल इन्टरनेट विकल्पहरू मध्ये, सबैभन्दा छिटो केबल इन्टरनेट जडान हुनेछ। यी जडान प्रकारहरू मध्ये, जब फाइबर अप्टिक सेवा, जुन तामा केबल विधिको विकल्पको रूपमा उत्पादन गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ, इन्टरनेटको गति अन्य भन्दा बढी हुनेछ।
पूर्वाधार समस्या: पूर्वाधार समस्याहरूले पनि तपाइँको इन्टरनेट गति कम गर्न सक्छ। तपाईंको स्थानमा आउने केबलहरूमा त्रुटि भएको हुन सक्छ, र यो समस्या सामान्यतया इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तुरुन्तै देखेका छन् र आवश्यक सुधारहरू तपाईंको ध्यान बिना नै गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक ग्राहकले कल सेन्टर वा एसएमएस इ. तरिकाहरू जानकारी गराउने।
यदि समस्या त्यति फराकिलो छैन भने, तपाईंको अपार्टमेन्टमा, तपाईंको घरको जडानहरूमा समस्या छ भने पछि मात्र थाहा पाउन सकिन्छ। यी अवस्थामा, एक गल्ती रेकर्ड लिइन्छ र प्राविधिक एकाइका टोलीहरूले समस्यालाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरी पछि समाधान गर्छन्।
तपाईंको मोडेमको स्थान: तपाईंको घर वा कार्यालयमा मोडेमको स्थान इन्टरनेटको गतिलाई असर गर्ने कारकहरू मध्ये एक हो। तपाईंले इन्टरनेटमा जडान गर्नुहुने यन्त्र र तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको मोडेम बीचको दूरी, पर्खालहरूको सङ्ख्या र भित्ताको मोटाईले तपाईंको इन्टरनेटको गति घट्न सक्छ वा तपाईंको इन्टरनेट जडान विच्छेद हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, तपाईले आफ्नो वायरलेस मोडेमको अतिरिक्त राउटर (राउटर, वाइफाइ एक्स्टेन्डर) किन्न सक्नुहुन्छ र यो राउटरलाई तपाईले इन्टरनेटमा जडान गरिरहनुभएको उपकरणको नजिक राख्न सक्नुहुन्छ, र यसरी तपाईले आफ्नो इन्टरनेट गतिमा समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। ।
क्षेत्रमा ताररहित सञ्जालहरूको सङ्ख्या: तपाईंको भवन वा सडकमा कतिवटा वायरलेस नेटवर्कहरू छन् भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं सयौं ताररहित सञ्जालहरू भएको वातावरणमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो जडानको पूर्ण फाइदा लिइरहनुभएको छैन।
कम्प्युटर समस्याहरू: स्पाइवेयर र भाइरसहरू, मेमोरीको मात्रा, हार्ड डिस्क स्पेस र कम्प्युटरको अवस्थाले इन्टरनेट जडानको गति कम गर्न सक्छ। यस तरिकाले, तपाइँ कुनै पनि समस्याबाट बच्नको लागि तपाइँको कम्प्युटरमा भाइरस र स्पाइवेयर सुरक्षा कार्यक्रम स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
एकै समयमा धेरै प्रोग्रामहरू चलाउनु: तपाईंको कम्प्युटरमा धेरै कार्यक्रमहरू र अनुप्रयोगहरू चलाउँदा तपाईंको इन्टरनेटको गति कम हुन्छ। द्रुत इन्टरनेट अनुभवको लागि, तपाईंले एकै समयमा धेरै अनुप्रयोगहरू र कार्यक्रमहरू चलाउनु हुँदैन।
वेबसाइट घनत्व वा इन्टरनेट प्रयोग घण्टा: यदि तपाइँ प्रयोग गर्न चाहानु भएको वेबसाइट भारी छ, यदि धेरै मानिसहरूले एकै समयमा यो साइट पहुँच गर्न प्रयास गर्दै छन् भने, त्यो साइटमा तपाइँको पहुँच ढिलो हुन सक्छ। थप रूपमा, तपाईंले इन्टरनेट प्रयोगको पीक घण्टामा तपाईंको इन्टरनेट गति सामान्य भन्दा कम रहेको देख्न सक्नुहुन्छ।
इन्टरनेटको गति कसरी बढाउने ?
तपाईंले निम्न वस्तुहरू लागू गरेर समय समयमा सुस्त हुने तपाईंको इन्टरनेटको गति छिटो बनाउन सक्नुहुन्छ;
आफ्नो मोडेम पुन: सुरु गर्नुहोस्: लगातार र लामो समयको लागि काम गर्ने मोडेमले समय समयमा समस्याहरू अनुभव गर्न सक्छ। यदि तपाइँ इन्टरनेट स्पीड समस्यामा हुनुहुन्छ भने, तपाइँको मोडेम बन्द र सक्रिय गर्नाले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ। यो कार्य गर्नको लागि, तपाईंले यन्त्रमा पावर बटन थिचेर यन्त्र बन्द गर्न र 30 सेकेन्ड पछि यसलाई फेरि खोल्न आवश्यक छ। जब तपाइँ मोडेम बन्द गर्नुहुन्छ, मोडेमका सबै बत्तीहरू बन्द हुनुपर्छ।
यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि तपाइँले यन्त्र बन्द गर्नुभएको छ भने, यन्त्रको एडाप्टर केबल अनप्लग गर्दै, 30 सेकेन्डको लागि कुर्दै र यसलाई पुन: प्लग इन गर्दा पनि त्यस्तै हुनेछ। मोडेम अन र अफ गरेपछि इन्टरनेट जडान फिर्ता आउन ३-५ मिनेट लाग्न सक्छ। मोडेम अन र अफ गरेपछि, तपाइँ सजिलैसँग मोडेममा रहेको चेतावनी बत्तीहरू पछ्याउन सक्नुहुन्छ कि इन्टरनेट जडान फिर्ता छ।
नयाँ मोडेल मोडेम प्रयोग गर्नुहोस्: निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको Wi-Fi पासवर्ड सुरक्षित छ। यदि तपाइँको पासवर्ड सम्झौता गरिएको छ र तपाइँ बाहेक अन्य व्यक्तिहरूले तपाइँको इन्टरनेट प्रयोग गर्दछ भने, तपाइँको इन्टरनेट गति धेरै कम हुनेछ। आफ्नो मोडेमलाई नवीनतम मोडेलमा परिवर्तन गर्नुहोस्। धेरै वर्षको लागि प्रयोग गरिएको मोडेमले छिटो इन्टरनेट जडान रोक्न सक्छ।
तपाईंको ब्राउजरमा धेरै बुकमार्कहरू नराख्नुहोस्: यदि तपाईंसँग धेरै मनपर्ने वा बुकमार्कहरू छन् भने, तिनीहरूले तपाईंको इन्टरनेट गति घटाउन सक्छ। किनकि तपाईंले आफ्नो ब्राउजर खोल्दा प्रत्येक पृष्ठ लोड हुन्छ। यी साइटहरू नियमित रूपमा सफा गर्नुहोस्।
भाइरसका लागि स्क्यान गर्नुहोस्: यदि तपाइँको कम्प्युटरमा भाइरस छ भने, यसले तपाइँको इन्टरनेटको गति घटाउन सक्छ। तपाईंको कम्प्युटरलाई भाइरसहरूको लागि स्क्यान गर्नुहोस् र कुनै पनि अवस्थित भाइरसहरू हटाउनुहोस्। तपाईको कम्प्युटर र इन्टरनेट दुबैको गति बढ्नेछ।
Wi-Fi को सट्टा इथरनेट केबलको साथ इन्टरनेटमा जडान गर्नुहोस्: डेटा प्रवाहको समयमा कुनै पनि डेटा हानिबाट बच्न वायरलेस रूपमा इन्टरनेटमा जडान गर्नुको सट्टा तपाईले इथरनेट केबलको साथ इन्टरनेटमा जडान गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। इथरनेट केबलको साथ इन्टरनेटमा जडान गर्नाले गतिको हानि कम गर्नेछ र राम्रो जडान अनुभव प्रदान गर्नेछ।
आफ्नो डेस्कटप सफा गर्नुहोस्: महत्वहीन कागजातहरू मेटाउनुहोस्। एउटा फोल्डरमा महत्त्वपूर्णहरू जम्मा गर्नुहोस्। यसरी, तपाइँ कम्प्युटरको कारणले गति समस्याबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
राति आफ्नो मोडेम बन्द गर्नुहोस्: तातो समस्याले सिग्नल समस्या निम्त्याउन सक्छ।
नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुहोस्: नियमित रूपमा आफ्नो कम्प्युटरमा अपरेटिङ सिस्टमको लागि अद्यावधिकहरू डाउनलोड गर्नुहोस् ।
तपाईंको इन्टरनेट इतिहास सफा गर्नुहोस्: यदि तपाईंको ब्राउजर (गुगल क्रोम, एक्सप्लोरर इत्यादि) इतिहासमा जम्मा भएका फाइलहरू बढ्यो भने, यो घनत्वले तपाईंको इन्टरनेटको गति कम गर्न सक्छ। तपाइँको ब्राउजर क्यास नियमित रूपमा खाली गर्नुहोस् र तपाइँको कम्प्युटर सफा गरे पछि पुन: सुरु गर्नुहोस्।
आफ्नो DNS सेटिङहरू स्वचालित रूपमा सेट गर्नुहोस्।
इन्टरनेट एक्सप्लोररको सट्टा क्रोम, फायरफक्स, ओपेरा वा सफारी प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईको कम्प्युटरको कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस् र तपाईले प्रयोग नगर्ने सबै प्रोग्रामहरू हटाउनुहोस्, add remove programs प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको इन्टरनेट प्याकेज अपग्रेड गर्नुहोस्: तपाईंले आफ्नो हालको इन्टरनेट प्रदायकलाई कल गरेर उच्च प्याकेजमा स्तरवृद्धि गर्ने बारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईंले आफ्नो पूर्वाधारको लागि उपयुक्त छिटो इन्टरनेट प्याकेजबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ।